‘Miidiyaan haleellaa gosa haaraa as dhufaa jiruuf qophaa’uu qaba’ – Kichuu
‘Miidiyaan haleellaa gosa haaraa as dhufaa jiruuf qophaa’uu qaba’ – Tsadaala Lammaa
Guyyootaan dura heeyyamnisaa kan haqamee ture miidiyaa Addis Standard kan hundeessan Aadde Tsadaale Lammaa, haleellaan kanaan durarraa adda ta’e miidiyaarra gahaa waan jiruuf, gaazexeessitoonni Itoophiyaa kanaaf qophaa’uu qabu jechuun BBCtti himan.
(bbc)—Kanaa dura miidiyaaleen mirgasaaniif mootummaa wajjin falmataa turu eeruun, amma haalli sun geeddarameera jedhan.
Keessattuu marsariitiiwwan irratti bal’inaan mul’ataa dhufeera jedhan.
Mootummaan gara damee dhuunfaarratti qiyyaaffachuun dhiibbaan qaqqabsiisu akka isaan yaaddesseefi dhaabbachuu qabu dubbatan.
Haleellaan kun namoota dhuunfaa, dhaabbilee mootummaa waliin hariiroo qabanirraa arrabsoofi doorsisa isaaniirra qaqqabuu dabalata.
Dhaamsi yeroo tokko tokko ergamu ‘’maatiikoollee kan kan sodaachisu ta’aa dhufeera’’ jedhan.
‘’Gaazexeessitoonni ta’ii haaraa kanaaf qophaa’uu qabu, ta’ii raaawwachuu hin qabne garuu dhufaa jirudha. Waan ta’aa jiru waan kanadha.
Qondaalli mootummaa tokko ’’nama harma haadha ofii ciniine’’ wayita jedhu, deeeggartoonni mootummaa kumaatamatti lakkaa’aman haala walfakkaatuun simatu.
Miidiyaa haleellaa akkasirraa ittisuuf kuni baratamuu qaba,’’ jedhan.
Murtoo Abbaa Taayitaa
Aadde Tsadaalen Abbaan Taayitaa Miidiyaalee Itoophiyaa eeyyama Addis Istaandard uggure seera cabsuun murtoo itti hin yaadne dabarsuun waan nama naasisu ta’uu dubbatan.
‘’Waan ta’uu hin qabneefi uumamuu hin qabne ture’’ jechuun uggura Abbaa Taayitichaa ibsan.
Abbaan Taayitaa Miidiyaalee seera miidiyaa haaraa baheen aangoo kennameef irra ce’ee eeyyama dhaabbata Addis Istaandard maxxansu ‘JAKENN Publishing’ dhorkuun sirrii akka hin taane Abbaa Taayitichaatiin falmuu kaasan.
Hundeessituun Addis Istaandard Aadde Tsadaaleen, eeyyama daldalaa kan dhaabbatichaaf kenne Ministeera Daldalaati malee Abbaa Taayitichaa miti jedhan.
Abbaan Taayitaa Miidiyaalee eeyyamni kenne kan toora intarneetiirratti ilaallatu qofaadha.
Dhaabbatichi akeekkachisa duraa akka seeratti otoo hin kenniiin fi haalduree barbaachisaa otoo hin guutiin, eeyyama dhorkuuf murtoon Abbaan Taayitichaa dabarse seera qabeessa hin turre jedhan Aadde Tsadaaleen.
”Hojiin seera kabajuun jalqaba qaamolee seera kabachiisanirra eegalu qaba. Seera kabachiisaan seeraan ol miti,” jedhani ibsan Aadde Tsadaalen.
Kanaan duras qondaalli olaanaan dhaabbatichaa tokko bu’uura haala hin qabneen Aaddis Istaandard ‘’harma haadha ofii kan ciniinefi baandaa’’ jechuun arrabsuu dubbatan.
Abbaan Taayitichaa ejjannoon qondaala mana hojichaa murtoo kennamurratti dhiibbaa qabaachuun akka mirkaneeffamu marii hoggantoonni miidiyaalee Abbaa Taayitichaa waliin taa’aniirratti gaafatameera jedhan.
‘’Ajandaa gartuu shororkeessaa tarkaanfachiisa’’ himannaa jedhurratti Abbaan Taayitichaa ibsa akka kennu gaafachuun, himannaa akkasii nageenya hojjattootaa balaarra kan buuse ture jedhan.
Qopheessitoonni Addis Istaandard Ittigaafatamaa Abbaa Taayitaa Miidiyaalee Obbo Idiris Mohaammad waliin erga mariyatanii booda wal hubachuu kaasan.
Eeyyama dhorkame deebisuu dabalatee Abbaan Taayitichaa himannaa dhiyeesse ilaalchisuun ibsa ifatti akka kennuuf waadaa seenuu hordofee, Roobii waaree boodarraa eegaluun hojiitti deebi’uu Aadde Tsadaalen himaniiru.
Seerri miidiyaa fooyya’e akka jedhutti, qaamni eeyyamni kennameef gochoota dhorkaman irra deddeebiin kan sarbufi sarbamiinsi qaqqabsiise dabalaa kan adeemufi fooyya’iinsa kan hin agarsiifne yoo ta’e, Abbaan Taayitaa ji’a tokko hin caalleef eeyyama ugguruu danda’a.
Labsichi eeyyama haquu, haaromsuu ykn dhorkuu dhimmoota ilaallatan murteessuu kan qabu Boordii Abbaa Taayitichaati jedha.
Addis Standard ganna 12n dura hundaa’e
Bilisummaa miidiyaa Aadde Tsadaalen waggaa sadiitti ogeeyyiin hedduu irratti dhama’anii seerri miidiyaa haaromfame, bilisummaa miidiyaaleef shoora qabaachuu amanu. ‘’Seericha kan hin daangofne, garuu mirga ittigaafamummaa hedduun guutameen kan eeyyamu ta’uu arguun, akka miidiyaattii nutis babal’isaa jirra,’’ jedhan. Haata’u malee, seericha kabachiisuu qaama qabuun murtoo akkasii murtaa’un nama naasisa jedhan. Dhaabbanni isaanii hojii kan dhaabe dhimmi kun sirnaan akka ilaalamu ta’uu itti dabalanii dubbataniiru. Miidiyaaleen Itoophiyaa gocha akkasii keessaa bahuuf waggoota dheeraaf falmaniiru, seeraa ragga’e cabsuun kabajuu diduudha, seera kabajuu dhabuun immoo iddoo duraanitti deebi’udha jedhanii dubbatan.
’Mootummaa qeequun mirga heeraan naaf kenname’ Eyyamni Addis Istaandard dhorkamuun mootummaa qeequrraa maddee? jedhamuun gaaffii dhiyaatef Aadde Tsadaalen, ’’Addis Istaandard dhaabbatadha. Dhuunfanis qeeqaan dhiyeessu yoo ta’e, mirga heeraan qabudha’’ jedhan. ”Itoophiyaa biyya dimokiraasiin bultu goona yoo jedhame namoonni dhuunfaa mootummaa yaadaan mormuuf mirgi qaban kabajamuufi qaba,’’ jedhan. Aadde Tsadaalen yeroo ADWUI keessallee qeeqa dhiyeessaa akka turan dubbatan. Waraanni Tigiraay wayita jalqabamurraa eegalee mormaa akka turan kaasaniru. ‘’Waraanni yeroo eegalurraa kaasanii kanneen deeeggaran turaniiru, rakkoon akkasii isaanirra qaqqabeera?’’ jedhanii gaaffii dhiyeessan. ‘’Garaagarummaa yaadarratti hundaa’uun yaadni namoota muraasaa kabajamee, kan namoota biroo sirni keessatti hin kabajamne hundaa’uu hin qabu,’’ jedhan.
”Tattaaffiin hangas gahuufi duuti namootaa hedduu mootummaa ADWUI caalu hundeessuuf miti. Mootummaan namoota morman, qixa namoota deeggaranii kabajuu wayita danda’e sirna fooyyeen hundeessuun kan danda’amu,’’ jedhanii BBCtti himan. Ifaan ifatti sababan yaada dhiyeesuuf miidiyaan cufuun yaadame yoo ta’e gocha sirrii mitii jedhan. Addis Standard ganna 12 dura barruu ji’aan Afaan Ingiliffaan maxxanfamu ta’uun kan hundeeffame wayita ta’u, sababa labsiin yeroo muddamaa haala hojiirratti dhiibbaa uumeen guutummaatti gara marsariitiin odeeffannoo dhiyeessuurratti hojjataa jira.
Odeessa Haleellaa Bahar Daar
Odeessa Haleellaa Bahar Daar ------------ Odeessa Haleellaa Bahar Daar ------------ Haleellaa misaayulii fi lola lafoo…
Dhufaa jirra! Finfinnee qophee dha?
Dhufaa jirra! Finfinnee qophee dha? Waraanni kun kan Tigiraay osoo ta'e ijoolleema keenyatu FB waliin…
'DAADHII GALAAN' Weellee Isaa Haaraa
እኝህ አባት ኦቦ ቶለሳ ፊዳ ይባላሉ:: በአከባቢያቸው የተከበሩ የኦሮሞ አዛዉንት ናቸው:: በትላንትናዉ እለት ማለትም ሐሙስ,…